Vaovao - Northvolt, orinasam-batana lithium voalohany ao an-toerana, nahazo fanohanana ara-bola banky US $ 350 tapitrisa
Northvolt, orinasam-batana lithium voalohany ao an-toerana, nahazo fanohanana ara-bola banky US $ 350 tapitrisa
Araka ny tatitry ny fampahalalam-baovao vahiny dia nanao sonia fifanarahana fampindramam-bola amerikana 350 tapitrisa dolara ny European Investment Bank sy ny mpanamboatra bateria Suède Northvolt mba hanome fanampiana ho an'ny orinasa super bateria lithium-ion voalohany any Eoropa.
Sary avy any Northvolt
Tamin'ny 30 Jolay, fotoana i Beijing, araka ny tatitry ny fampahalalam-baovao avy any ivelany, ny Banky Eropeana sy ny mpanamboatra bateria soedoa Northvolt dia nanao sonia fifanarahana fampindramam-bola $ 350 tapitrisa ho fanampiana ho an'ny orinasa super bateria voalohany lithium-ion tany Eropa.
Ny vola famatsiam-bola dia homen'ny European Strategic Investment Fund, izay andry lehibe amin'ny drafi-bolan'ny Eropeana. Tamin'ny taona 2018, nanohana ny fametrahana tsipika famokarana Northvolt Labs ny Banky Iraisam-pirenena Eropeana izay nametraka ny famokarana tamin'ny faran'ny taona 2019, ary nanamboatra ny lalana ho an'ny orinasa super voalohany ao Eropa.
Ny zavamaniry gigabit any avaratr'i Northvolt izao dia haorina ao Skellefteé ao avaratr'i Soeda, toerana famoriana manan-danja ho an'ny akora sy ny harena ankibon'ny tany, miaraka amina tantara lava momba ny fanamboarana asa tanana sy ny fanodikodinam-bola. Ankoatr'izany, ny faritra dia manana ihany koa angovo angovo azo antoka. Ny fananganana tanimbary any avaratr'i Soeda dia hanampy an'i Northvolt hampiasa angovo azo havaozina 100% ao amin'ny dingam-pamokarana azy.
Andrew McDowell, filoha lefitry ny Banky Eropeana momba ny Investment Investment, dia nanamarika fa hatramin'ny nananganana ny Vondron-bateria Eropeana tamin'ny taona 2018 dia nampitombo ny fanohanany ny rojom-batran'ny bateria ho fampiroboroboana ny fametrahana otrikarena stratejika any Eropa.
Ny teknolojia bateria herinaratra no lakile hitana ny fifaninanana eoropeana sy ho avy ambany-karbon. Ny fanohanana ara-bola ny Banky Eropeana ho an'ny Northvolt dia misy dikany lehibe. Ity fampiasam-bola ity dia mampiseho fa ny fahavitrihan'ny banky eo amin'ny sehatry ny ara-bola sy ara-teknolojia dia afaka manampy ireo mpampiasa vola tsy miankina hanatevin-daharana tetikasa.
Maroš Efiovich, filoha lefitry ny Vondrona eoropeana izay mikarakara ny Vondron-jamaody Eropeana dia nilaza: Ny Banky Eropeana momba ny Investment Investment sy ny Vaomiera eropeana dia mpiara-miombon'antoka stratejika an'ny Vondron-bateria Eropeana. Izy ireo dia miara-miasa akaiky amin'ny indostrian'ny bateria ary ny mpikambana ao amin'ny mpikambana mba hahafahan'ny Europe mifindra amin'ity sehatra stratejika ity. Mahazo mpitarika mpitarika eran-tany.
Northvolt dia iray amin'ireo orinasa lehibe any Eropa. Ny orinasa dia mikasa ny hanangana ny Gigifactory lithium-ion voalohany ao an-toerana miaraka amin'ny fitrandrahana karbona kely. Amin'ny alàlan'ny fanohanan'ity tetik'asa mpizara-kanto ity dia nametraka ny tanjony manokana ny Vondrona EU hanatsara ny faharetana sy ny fizotram-pahefana ao amin'ny orinasa indostrialy sy ny teknolojia.
Northvolt Ett dia ho toeram-pamokarana lehibe indrindra an'ny Northvolt, tompon'andraikitra amin'ny fanomanana fitaovana mavitrika, fivorian'ny bateria, ny kitapom-bola ary ny fitaovana hafa fanampiana. Aorian'ny asa feno, i Northvolt Ett amin'ny voalohany dia hamokatra 16 GWh ny herin'ny bateria isan-taona, ary hitarina amin'ny mety ho 40 GWh amin'ny dingana manaraka. Ny batteran'i Northvolt dia natao ho an'ny fampiharana automotika, fitahirizana grid, indostrialy ary portable.
Peter Karlsson, mpiara-manorina ary Tale Jeneralin'ny Northvolt, dia nilaza: "Ny Banky Eropeana dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fampandehanana io tetikasa io hatramin'ny voalohany. Northvolt dia mankasitraka ny fanohanan'ny banky sy ny vondrona eoropeana. Mila manangana ny fananany i Eropa miaraka amin'ny rojom-pamatsiana famatsiana bateria lehibe, ny Banky Eropeana Investment dia nametraka fototra mafy ho an'io fizotra io. ”